Uluhlu lweeNtengiso zePropathi: Business Directory Abahambisi bokuPhucula iKhaya Alabama Birmingham
umbono Abahambisi bokuPhucula iKhaya ishicilelwe ngenyanga 1 edlule
I-Birmingham ((mamela), ekuhlaleni nayo:) sesona sixeko sineyona ndawo inabantu abaninzi e-United Kingdom, emva kweLondon, kunye nesona sixeko sineyona ndawo inabantu abaninzi kwi-English Midlands. Ikwangowona mmandla wedolophu inabantu abaninzi e-United Kingdom, kunye ne-1,137,123 eqikelelweyo yabemi, kwaye ithathwa njengeziko lentlalontle, inkcubeko, imali kunye nezorhwebo kwi-Midlands. Ngoyena rhulumente uphambili kwingingqi yeWest Midlands, eyona ndawo yeyesithathu eedolophini eUnited Kingdom, enabemi base2,897,303 e2017. Indawo ebanzi yedolophu yaseBirmingham yeyesibini ngobukhulu e-United Kingdom enabemi abangaphezu kwe-4.3 yezigidi. Ihlala ibizwa ngokuba yi "United States" yesibini "ye-United Kingdom." Idolophu yemarike kwithuba eliphakathi, iBirmingham ikhule kwi-18th century Midlands Enlightenment kunye nohlaziyo olulandelayo lwe-Industrial, oluqhubela phambili kwisayensi, kubuchwephesha, nakuphuhliso lwezoqoqosho. uthotho lwamanyathelo amatsha okubeka uninzi lweziseko zeli xesha loshishino lwezinto zamashishini. Nge-1791 ibibizwa ngokuba yi "dolophu yokuqala yokwenziwa kwehlabathi". Iprofayili yoqoqosho e-Birmingham eyingqayizivele, kunye namawaka eendibano zocweyo ezincinci ezibandakanya iintlobo ezahlukeneyo zentengiso eneemfuno ezizodwa nezinobuchule, zakhuthaza amanqanaba akhethekileyo okubonisa ubuchule kunye nezinto ezintsha kwaye zibonelela ngesiseko sezoqoqosho olwaluya kuhlala kwikota yokugqibela ye-20th century. I-injini ye-Watt ye-steam yenziwa e-Birmingham. Inqanaba eliphakamileyo lokuhamba kwabantu likhuthaza inkcubeko ye-radicalism eyathi, phantsi kweenkokheli ukusuka kuThomas Attwood ukuya kuJoseph Chamberlain, yayikukunika impembelelo yezopolitiko engalinganiyo eBritane ngaphandle kweLondon, kunye nepivotal nendima kuphuhliso lwentando yesininzi yaseBritane. Ukususela ngehlobo le-1940 ukuya kuthi ga kwintwasahlobo ye-1943, iBirmingham yaphoswa kanobom yiLuftwaffe yaseJamani kwinto eyaziwa ngokuba yiBirmingham Blitz. Umonakalo owenziwe kwiziseko zophuhliso zesixeko, ukongeza kumgaqo-nkqubo ngabom wokudiliza kunye nesakhiwo esitsha ngabacwangcisi, kukhokelele ekuvuseleleni ngokubanzi edolophini kule minyaka ilishumi idlulileyo. Uqoqosho lwaseBirmingham ngoku lilawulwa licandelo leenkonzo. Esi sixeko liziko eliphambili lezorhwebo kumazwe aphesheya, elibekwe njengedolophu ye-beta yehlabathi yi-Globalization kunye ne-World Cities Research Network kwindawo edibeneyo ephezulu ne-Edinburgh neManchester yazo zonke izixeko zaseBritane ngaphandle kweLondon; kunye nothutho olubalulekileyo, ukuthengisa, imicimbi kunye nehabhu yenkomfa. Uqoqosho lwayo oluhambelanayo lulwesibini ngobukhulu e-United Kingdom nge-GDP ye- $ 121.1bn (2014), kwaye iiyunivesithi zayo ezintandathu zenza ukuba libe lelona ziko likhulu kwimfundo ephezulu kweli lizwe ngaphandle kwaseLondon. Amaziko enkcubeko aseBirmingham-iSixeko saseBirmingham Symphony Orchestra, iBirmingham Royal Ballet, iBirmingham Repertory Theatre, iThala leeNcwadi laseBirmingham kunye neBarber Institute of Fine yezobuGcisa - bonwabele udumo lwamazwe aphesheya, kwaye isixeko sinobugcisa obunamandla nobunempembelelo kumgangatho ophantsi, umculo, Imibhalo yolwazi kunye neencwadi zobugcisa. Isixeko siza kubamba iMidlalo ye-Commonwealth ye2022. IBirmingham sesona sixeko sityelelwe e-UK ngabakhenkethi bamanye amazwe.Bantu baseBirmingham babizwa ngokuba yi-Brummies, igama elivela kwigama lesixeko elithi "Brum", elisusela kwigama ledolophu elidala, iBrummagem, ekucingelwa ukuba zithathwe kwi "Bromwich-ham". Isimbo sokubhala saseBrummie kunye nolwimi olwahlukileyo zahlukile.
I-United States yaseMelika (USA), eyaziwa njenge-United States (i-US) okanye i-US) okanye iMelika, lilizwe elibandakanya amazwe e-50, ingingqi yomdibaniso, imimandla emihlanu yokuzilawula, kunye nezinto ezahlukeneyo. Kwi-3.8 yezigidi zesikwere (i-9.8 yezigidi ze-km2), iUnited States lelizwe lesithathu okanye lesine ngobukhulu belizwe ngommandla opheleleyo kwaye incinci kancinane kunelizwekazi liphela leYurophu ye-3.9 yezigidi zeekhilomitha (10.1 yezigidi ze-km2). Ngabantu abangaphezu kwesigidi se-327, i-US lelona lizwe lesithathu linabantu abaninzi. Idolophu enkulu yiWashington, DC, kwaye eyona dolophu inkulu yabemi sisiXeko saseNew York. Amazwe angamashumi amane anesibhozo kwaye ingingqi yenqila yomanyano idibene eNyakatho Melika phakathi kweCanada neMexico. Ilizwe laseAlaska likumantla ntshona eMantla Merika, kumda weCanada ngasempuma nangaphesheya kweBering Strait ukusuka eRashiya ukuya entshona. Ilizwe laseHawaii sisiqithi esikwiLwandlekazi lwePasifiki. I-US Iindawo ezisasazeke malunga noLwandlekazi lwePasifiki nolwandle lweCaribbean, zolule indawo zommandla ezilithoba. I-geography eyahlukileyo eyahlukileyo, imeko yemozulu kunye nezilwanyana zasendle zaseMelika ziyenza ukuba ibe lelinye lamazwe e-17 megadiverse world.AmaIndiya ase-Paleo-afuduka asuka eSiberia aya kwilizwe laseMntla Merika ubuncinci kwiminyaka ye-12,000 eyadlulayo. I-colonization yaseYurophu yaqala kwinkulungwane ye-16th. I-United States ivele kwi-16 yemikhosi yase-Bhritane esekwe ecaleni kwe-East Coast. Emva kweMfazwe yaseFrance neyaseIndiya, iimpikiswano ezininzi phakathi kweGreater Britain kunye neekoloni zakhokelela kwiAmerican Revolution, eyaqala nge1775, kunye nesibhengezo esilandela ukuzimela kwi-1776. Imfazwe iphela ngo-1783 kunye ne-United States yaba lilizwe lokuqala ukuzuza inkululeko kumandla aseYurophu. Umgaqo-siseko okhoyo wamkelwa kwi-1788, kunye nezilungiso zokuqala ezilishumi, xa zidityanisiwe zaqanjwa kwathiwa yiBhili yamaLungelo, zaqinisekiswa kwi-1791 ukuqinisekisa inkululeko enkulu yoluntu. I-United States yaqala kulwandiso olukhulu e-North America kuyo yonke le nkulungwane ye-19th, yafumana amasimi amatsha, yagxotha izizwe zoMdabu baseMelika, kwaye ngokuthe ngcembe yavuma amazwe amatsha yaze yafumana ithuba kwilizwekazi i-1848.Isiqingatha sesibini senkulungwane ye-19, i-Civil War kukhokelele ekuphelisweni kobukhoboka. Ngasekupheleni kwenkulungwane, i-United States yayingene kuLwandlekazi lwePasifiki, kwaye uqoqosho lwayo, oluqhutywa yinxalenye yeRevolution Revolution, lwaqala ukwanda. Imfazwe yaseSpeyin naseMelika kunye neMfazwe Yehlabathi I yaqinisekisa imeko yelizwe njengamajoni omhlaba. I-United States yavela kwiMfazwe yesibini (II) yeHlabathi njengelona gunya liphezulu lehlabathi, ilizwe lokuqala lokuphuhlisa izixhobo zenyukliya, ilizwe kuphela elizisebenzisa emfazweni, kunye nelungu elisisigxina leBhunga lezoKhuseleko leZizwe eziManyeneyo. Umthetho otshabalalisayo wamalungelo oluntu, ngokukodwa umThetho wamaLungelo oluNtu nge1964, umThetho wamaLungelo okuvota we1965 kunye noMthetho weZindlu eziLungileyo we1968, ucalucalulo olungekho mthethweni ngokusekwe kubuhlanga okanye umbala. Ngexesha loMlo obandayo, i-United States kunye neSoviet Union bakhuphisana kwi-Space Race, befikelela kwi-1969 US Ukufika kwenyanga. Ukuphela kweMfazwe ebandayo kunye nokuwa kweSoviet Union e-1991 kushiye i-United States njengeyona nto iphambili kwihlabathi.I-United States yeyona mfazwe indala yabaseleyo emhlabeni. Yiriphabliki yomanyano kunye nedemokrasi emele. I-United States lilungu elisekwe kwiZizwe eziManyeneyo, iBhanki yeHlabathi, iNgxowa-mali yeMali yeHlabathi, uMbutho wamazwe aseMelika (OAS), kunye neminye imibutho yezizwe ngezizwe. I-United States lilizwe eliphuhlileyo kakhulu, kunye noqoqosho olukhulu kakhulu kwihlabathi ngokobuncinci be-GDP kunye noqoqosho lwesibini ngobukhulu yi-PPP, ibalwa malunga nekota ye-GDP yehlabathi. I-US Uqoqosho ubukhulu becala lusemva kweshishini, luboniswa ngamandla kweenkonzo kunye nemisebenzi esekwe kulwazi, nangona icandelo lokuvelisa lisahlala lesibini ngobukhulu emhlabeni. I-United States ingowangaphandle elizweni kwaye ngowesibini othengisela iimpahla ezinkulu, ngexabiso. Nangona inani labemi liphela yi-4.3% yehlabathi liphela, i-US iphethe i-31% yobutyebi obugcweleyo kwihlabathi, esona sabelo sikhulu sobutyebi behlabathi sigxunyekwe kwilizwe elinye.Ngenxa yengeniso nokungalingani kwengeniso, i-United States iyaqhubeka ikwinqanaba eliphezulu kakhulu kumanyathelo okusebenza kwezentlalo noqoqosho, kubandakanya nomvuzo ophakathi, ukukhula kwabantu, nge-capita GDP, kunye nemveliso yabasebenzi. I-United States yeyona mikhosi iphambili kwezomkhosi emhlabeni, yenza isithathu kwinkcitho yomkhosi wehlabathi, kwaye iphambili kwezopolitiko, kwinkcubeko nakwezenzululwazi kwilizwe jikelele.